﻿ एयरफोनको प्रयोग धेरै गर्नुहुन्छ ? सावधान ! क्यान्सर होला
एयरफोनको प्रयोग धेरै गर्नुहुन्छ ? सावधान ! क्यान्सर होला
पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भएसँगै विभिन्न उपकरणको प्रयोग पनि बढ्न थालेको छ । कतिपय मानिसहरु जतिबेला पनि कानमा इयरफोन राखेर हिँडिरहेका हुन्छन् । अझ कति त निदाउँदा पनि कानमा इयरफोन राखेरै निदाउने गर्छन् ।
तर यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा नहुनसक्छ । बजारमा पाउने सबै इयरफोन राम्रा नहुन पनि सक्छन् । त्यसले हामीलाई झन् समस्यामा पार्न सक्छ । कमसल इयरफोनले हामीलाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउँदै लैजान सक्छन् । अझ पछिल्लो समय भएका अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने यसरी इयरफोन प्रयोग गर्दा मानिसमा क्यान्सरसमेत हुनसक्छ ।
इयरफोन लामो समय प्रयोग गर्नाले मानिसको सुन्‍न सक्‍ने क्षमतामा कमी आउँदै जान्छ । मानिसको शरीरमा ४० देखि ५० प्रतिशत श्रवण शक्ति घट्नुको कारणमा इयरफोनको धेरै प्रयोग मान्नेहरु धेरै छन् । यसले सबैलाई चाँडै बहिरो बनाउन सक्छ ।
इयरफोनमा जमेको धुलोका कारण कानमा इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ । यसले ठूलो रोग पनि निम्त्याउँछ । स्पष्ट आवाज नसुन्ने, इन्फेक्सन हुने तथा कान दुख्ने समस्या पनि बढ्दै जानसक्छ ।
धेरै र चर्को आवाजमा इयरफोनमा गीत सुन्ने बानी छ भने त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । कतिसम्म भने यसले कानको क्यान्सरसमेत गराउने अध्ययनमा देखिएको छ । त्यस्तै धेरै गीत सुन्नाले मुटुसम्बन्धी विभिन्न समस्या पनि निम्तिन सक्छन् ।
यस्ता छन् मह र तातो पानी खानुका फाइदा
यस्ता छन् धनियाँका फाइदा
कोरोना भाइरस : कुन देशमा कति संक्रमित ?